128gb inokwana galaxy s20? iri 256gb kana 512gb giraxy s20 inokosha?
Kuru Nhau & Ongororo Iko 128GB inokwana Galaxy S20? Iko 256GB kana 512GB Galaxy S20 yakakosha here?
Iko 128GB inokwana Galaxy S20? Iko 256GB kana 512GB Galaxy S20 yakakosha here?
Iyo Samsung Galaxy S20 ndiyo Korean hofori & apos; s yazvino mureza foni, uye ese matatu akasiyana ayo - iyo S20, S20 + uye S20 Ultra inopa 128GB, 256GB uye 512GB sarudzo dzekuchengetedza. Nhare dzinouya nekunaka AMOLED kuratidza, inokwanisa ye120Hz yekuvandudza mwero, uye makamera akasimba, mashandiro uye hupenyu hwebhatiri. Kana iwe & apos; ukaisa zvakare pakutenga modhi mune iyo S20 mutsetse, iwe unogona kunge uchinetseka kana base base yekuchengetera sarudzo ye128GB ingakukwana iwe. Lets tsvaga!
Iko Galaxy S20 inouya nemarii?
Iwe haumbowana iyo chaiyo huwandu hwesununguko yekuchengetedza pane yako smartphone sekushambadzirwa. Iyo foni & apos; s inoshanda sisitimu uye yepamoyo (isingabvisike) maapplication anenge atora imwe yekuchengetedza nekukurumidza paunotanga kuibatidza, uye inoda kugara ipapo kuti inyatsoshanda.
Pane iyo Galaxy S20, iyo Android inoshanda sisitimu pamwe neinogona kutakura pre-yakaiswa software inogona kutora kupfuura 19GB yekuchengetedza. Iyo chaiyo nhamba inogona kusiyana uye ichawedzera nekufamba kwenguva sezvo foni iri kushandiswa, asi kunze kwebhokisi, iyo system-yakatorwa chengetedzo pane Galaxy S20 yaiwanzo kuve iri pakati pe19GB ne29GB. Iyo & apos; yakachengeteka kufunga kuti chero chengetedzo yaunosarudza yaunosarudza, foni yako inogona kuuya neinenge 20GB isingasununguke yekuchengetedza pane kushambadzirwa. Kutora izvi uchifunga, yako Galaxy S20 128GB musiyano ungangouya neinenge 108GB kana kushoma yekuchengetera yemahara, nepo 256GB uye 512GB akasiyana - ane angangoita 236GB uye 492GB zvichiteerana.
Ingani nzvimbo maapplication nemitambo zvinotora pane iyo Galaxy S20?
Mangani maapplication anogona kubata 128GB Galaxy S20?
Let & apos; s titarise mamwe eanonyanya kufarirwa maapplication vanhu vangangoisa, uye ona kuti ingani nzvimbo yavanotora pane yako Galaxy S20. YouTube inotora ingangoita 110MB yekuchengetedza, neTikTok inotora 61MB. Facebook inotora inenge 42MB, nepo Messenger - imwe 38MB. WhatsApp inotora 22MB chete, Zoom - 31MB, Snapchat - 55MB uye Netflix - ingangoita 15MB painotanga kuiswa.
Kunyangwe idzo dziri maminiti manhamba akakunda & apos; d kuita yako 128GB yekuchengetera, ramba uchifunga kuti mamwe eaya maapps zvishoma nezvishoma anotora nzvimbo yakawanda sezvaunoramba uchizvishandisa, sezvo ivo vachizongo chengeta mapikicha, mavhidhiyo uye imwe data munharaunda pane yako Galaxy S20. Chero zvazvingaitika, izvo zvatiinazvo pari zvino zvinoenderana ne374MB yekuchengetedza iri kutorwa, inova ingori 0.37GB. Zviripachena, zvinoenderana nekushandisa kwako, asi kunyangwe iyo 128GB Samsung Galaxy S20 inofanirwa kukwanisa kukwana ese maapplication aungazomboda.
Mangani mitambo inogona kubata 128GB Galaxy S20?
Mitambo inonzwisisika inotora yakawanda yekuchengetedza kupfuura avhareji app, sezvo kazhinji iine yakawanda mimhanzi, kurira, yakakwira-resolution mifananidzo uye imwe hombe data. Minecraft yakasarudzika, sezvo ichingotora pasi pe100MB, nepo Call of Duty: Nhare inotora inenge 2GB yekuchengetera, PubG Mobile - imwe 1.6GB, Blizzard & apos; s Hearthstone - 45MB kurodha pasi uye ingangoita 1.3GB mushure mekuisirwa, Pokemon GO - anenge 330MB. Kana iwe zvakare uchida mimwe mitambo yekunyaradza pafoni yako - Grand Theft Auto: San Andreas inotora 2,4GB yekuchengetedza, nepo Max Payne Mobile - 1,1GB. Kunyangwe iwe ukadzora zvese izvo, zvinosvika ku8,83GB, saka iyo base 128GB Galaxy S20 sarudzo inofanirwa kunge ichikwana kupfuura yako yese yaunofarira mitambo.
Yakawanda sei nzvimbo iyo mavhidhiyo, mifananidzo, uye mimhanzi inotora pane iyo Galaxy S20?
Iyo Samsung Galaxy S20 Ultra ine 108MP huru kamera, nepo iyo S20 uye S20 + iine 12MP iwo. Wepakati munhu angango pfura mavhidhiyo pane yakajairika resolution ye1080p pa30 mafuremu-pasekondi (FPS), iyo inokwana kutenderedza 1,75 megabytes inotorwa pasekondi yekurekodha.
Uine izvozvo mupfungwa, kunyangwe iyo 128GB Galaxy S20 ine yakaringana yekuchengetera 1200 maminetsi kana maawa makumi maviri ekurekodha vhidhiyo - kupfuura vanhu vazhinji vaigona kutora firimu panguva yefoni & apos; s lifespan. Ehezve, vashandisi vemasimba vangangoda kupfura pa4K 60FPS vanozokwanisa kukwana mashoma kamera kamera - zvishoma pamusoro pemaminetsi mazana maviri nemakumi mana kana maawa mana foni isati yazara. Ichi chichiri chiyero chakasimba chemavhidhiyo, uye zvingangoita zvakakwana kunyanzvi dzeYeTubers nevlogger, vasingafunge kutsigira kana kudzima mavhidhiyo ekare kamwe chete pamwedzi mishoma.
Mufananidzo wakatorwa nechero yeiyo Samsung Galaxy S20 misiyano inowanzo kuve pakati pe3 kusvika 6 megabytes muhukuru. Mazhinji emifananidzo mumashandisirwo edu aive padyo ne4MB, saka uchifunga nhamba iyoyo mupfungwa, unogona kunyatsotora mifananidzo inosvika makumi mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe pamugero weiyo 128GB modhi isati yazadza. Nekudaro, iyo 256GB Galaxy S20 inozokwana kusvika pamazana 63,900 mafoto, uye iyo 512GB modhi - inosvika 127,900 mafoto. Unogona kusarudza kutora yakakwira kana yakaderera resolution mapikicha pane yakasarudzika, asi kunyangwe zvakadaro, base Galaxy S20 inofanirwa kuve nechengetedzo yakakwana yemavhareji emushandisi & apos; s foto inodiwa, zvirinani kwemakore mashoma.
Vamwe vanhu vanofarira kuchengetedza mimhanzi yavo pane-chishandiso, pane kuendesa, saka inogona kunakidzwa kunze kwenyika. Sezvo nziyo dzinogona kusiyana zvakanyanya pakureba uye nemhando yepamusoro, nekudaro muhukuru hwefaira, isu & apos; tichashandisa avhareji semuenzaniso - maminetsi mana epamusoro-mhando 320mbps rwiyo rweSpotify, 9.6 megabytes muhukuru. Dzinopfuura 13,300 nziyo dzakadai dzinokwana mushe Galaxy S20 128GB musiyano. Zvakateerana, anopfuura 26,600 uye 53,300 emhando yepamusoro MP3 nziyo dzinogona kukwana mu256GB uye 512GB Galaxy S20 mhando.
Saka, ndeipi Samsung Galaxy S20 modhi yandinofanira kuwana: 128GB, 256GB, kana 512GB?
Iyo Galaxy S20 128GByatove nechengetedzo yakakwana kune vazhinji vashandisi 128 gigabytes anopfuura zvakakwana kune ese maapplication ako nemitambo, uye iwe & apos; muchakwanisa kurekodha kusvika kumakumi maviri emaawa evhidhiyo mavhidhiyo asati azadza. Kunyangwe iwe ukaronga nezvekuchengeta foni yako kweanotevera 3-to-4 makore, it & apos; zvingangoita kuti iwe & apos; uchazombofanira kunetseka nezvekuchengetedza panguva iyoyo. Kuenda nesarudzo iyi pamusoro pezvinonyanya kudhura ingangoita sarudzo yakanakisa, chero bedzi iwe & apos; usiri kuronga kugara uchipfura mavhidhiyo pakagadziriswa zvakanyanya, kana kuvaka rakakura rekunze kwemabhaisikopo nemumhanzi raibhurari parunhare.
Iyo Galaxy S20 256GBsarudzo inotapira yepakati, asi haina basa kune chero munhu. Vashandisi veMagetsi vangangoenda yesarudzo ye512GB, nepo mushandisi wepakati achifanira kunge achinyanya kugadzikana ne128GB. Zvisinei, kuva ne256GB yekuchengetera pafoni yako zvinoreva kuti unogona nyore nyore kuchengeta ako ese aunofarira mafirimu, mimhanzi, uye zvese zvimwe zviri pairi, uye nekunyaradza shandisa yako S20 kweanenge mana-kusvika-mashanu makore pamberi payo & apos; nguva yekukwiridzira kana tanga kusunungura kumusoro kwekuchengetedza.
Iyo Galaxy S20 512GBiri kukunda kwevanhu vazhinji, asi sarudzo hombe kune vashandisi vemasimba vanoronga kugara vachinyora mavhidhiyo mu4K kana kunyange 8K. 512GB inopfuura zvakaringana kunyangwe kune avhareji mushandisi weLaptop, saka parunhare, iwe unofanirwa kunge uine zano rezvose izvi zvekuchengetera kuitira kururamisa mutengo wauchazobhadhara. Kana usina chokwadi, sarudzo mbiri dzapfuura dzingangokwana zvaunoda kupfuura.
Iko Galaxy S20 ine kadhi re MicroSD here?
Ehe, ese maGlass S20 mamodheru, kunze kweiyo shoma edition Verizon S20 5G UW, vane microSD kadhi slot, uye inotsigira microSD makadhi anosvika 1 terabyte, ayo akaenzana ne1000 gigabytes! Saka kunyangwe kana iwe & apos; re paruzhowa nezve iyo 128GB Galaxy S20 sarudzo ichakukwanira, iwe & apos; fara kuziva kuti iwe unogona kugara uchiwedzera icho chengetedzo kuburikidza nekadhi re MicroSD.
Izwa zano kuti iyo S20 haitenderi kurekodha mavhidhiyo e8K kana mavhidhiyo e4K 60FPS akananga kukadhi re MicroSD, uye zvakafanana zvinoenda kumifananidzo yakaputika. Asi iwe unogonazve kufambisa nemaoko avo kubva kufoni & apos; s yekuchengetera kwemukati kuenda kune yakabatana microSD kadhi gare gare kana uchida. Kana uchifarira kuwana microSD kadhi, ona edu mapiki yemakadhi akanakisa e Micro SD efoni dze Samsung Galaxy .
Ndekupi kwandinogona kutenga iyo Samsung Galaxy S20?
Tenga Samsung Galaxy S20 kubva: Amazon: Zvakanakisisa Kutenga: Walmart: B & H: Samsung Verizon: AT&T
Tenga Samsung Galaxy S20 Plus kubva: Amazon: Zvakanakisisa Kutenga: Walmart: B & H: Samsung Verizon: AT&T
Tenga Samsung Galaxy S20 Ultra 5G kubva: Amazon: Zvakanakisisa Kutenga: Walmart: B & H: Samsung Verizon: AT&T
solar panel yefoni
Maitiro Ekudzima mafaera uye maRedirector muJava
Ko iPhone 6 makesi anokwana mukobvu iPhone 6s?
Samsung Galaxy S5 yakatangwa neBoost uye Virgin Mobile, pasina-contract zvirongwa zviripo
Leak inoratidza zvinhu zvitsva zvine runyerekupe nezve 'Tsvaga Yangu' app muIOS 14
Yakanakisa iPhone 12 Pro Max screen vadziviriri
Bhash Inosvika Nemienzaniso